पलको तर्फबाट लड्ने महिला वकिलको खुलासा, पललाई उच्चले धरौटीमा छोड्न सक्छ ( हेर्नुहोस भिडियो सहित ) – Sandes Post
March 31, 2022 894
पलको मतियारका रुपमा ब्याख्या गरिएका पलका म्यानेजर कृष्ण जोशी एक लाख धरौ|टी बुझाएर छुटेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुँले पलविरू`द्ध अधिकतम् १४ वर्ष कै`द सजा`यको माग गरेको थियो। पलको तर्फबाट लड्ने महिला वकिलको खुलासा, पललाई उच्चले धरौटीमा छोड्न सक्छ। पुरा जानकारी को लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
Prevकसले उडाईदियो अनमोलको ‘ए मेरो हजुर ४’ को ट्रेलर युट्युबबाट ?
Nextतपाई सपनामा सर्प देख्नुहुन्छ ? तपाईमा अब यी चकित हुने ६ कुराको लक्षण हो